'देशको प्रमुख पार्टी भएकाले राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हाम्रो काँधमा'- ओली -
‘देशको प्रमुख पार्टी भएकाले राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हाम्रो काँधमा’- ओली
प्रकाशित मिति : २०७८, ६ कार्तिक शनिबार
काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चारैतिरबाट पार्टीमाथि हमला भएपनि देशको प्रमुख पार्टी भएको बताएका छन्। शनिबार वडा अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देशको प्रमुख पार्टी रहेकाले राष्ट्र निर्माणको अभिभारा एमालेको काँधमा रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेशहरुमा हामी एक नम्बरमा छौं। हाम्रो पार्टी प्रमुख स्थानमा छ। राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। चारैतिरबाट हाम्रो पार्टीमाथि हमला भइरहेको छ। अनेक हमलाहरुका बावजुत आज पनि प्रतिपक्षमा हाम्रो भूमिका फेरिएका छौं। हाम्रो गणना एक नम्बरमा नै हुन्छ।’
प्रचण्ड र माधव नेपालको बहिर्गमनसँगै पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढेको ओलीले दाबी गरे। उनले गत डेढ वर्षदेखि केहि स्वार्थी तत्वहरुले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘पार्टी जीवनलाई खतरा पार्ने काम भयो। पार्टी छोडेर अलग पार्टी बनाउने। एउटा समूह लैजाने काम भयो।
पार्टीको हुर्मत लिने काम अब पार्टी भित्र रहेन। पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेल, सरकारबाट हटाउने खेल भए।’ उनले आफ्नो पार्टी देश र जनताका निम्ति समर्पित पार्टी रहेको दाबी गरे। ओलीले भने, ‘अविरल बर्षाका कारण बाढी पहिरो आयो। आजै वडा अधिवेशन गर्न नसकेका ठाउँ पनि छन्।
केहि ठाउँमा अधिवेशन स्थगित भएका छन्। विलम्ब अधिवेशन गर्न आह्वान गर्छु।’ ओलीले जनतालाई राहत सुविधा पुर्‍याउने कुरामा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘सरकारले क्षतीपूर्ति यथोचित उपलब्ध गराउनुपर्छ। घाइतको उपचारमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन।
जनतालाई राहत सुविधा पुर्‍याउने कुरामा ध्यान दिओस।’ अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशन पछि नयाँ ढंगले पार्टी अघि बढेको दाबी गरे। आफूलाई लोकतान्त्रिक र महत्वपूर्ण पार्टी भन्नेहरु संविधानअनुसार महाधिवेशन मिति सकिँदा पनि नगरेर अल्झिरहेको उनको भनाई छ।
‘हाम्रो पार्टी देशको नेता पार्टी हो। हामीले निर्माण गरेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न लागेका छौं।लोकतन्त्रिक अभ्यास भनेको के हो ? व्यवहारिक रुपमा नै त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसको व्याख्या हुनुपर्छ।
त्यो कुरा पार्टीले नमुनाका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।’ उनले भने।आधारभूत संगठनको रुपमा रहेको वडा संगठनको अधिवेशन एमालेले एकै पटक उद्घाटन गरेको छ।
‘राजाकै हस्तक्षेपले पराजित भएँ, प्रमाण सुरक्षित छ’- कमल थापा
‘एमाले र राप्रपा मिल्न सक्छन्’- माधव नेपाल
‘अब राप्रपा फुट्दैन, लिङ्देनलाई सहयोग गर्छु’- कमल थापा
बारका पदाधिकारीहरुलाई ओलीले भने-‘क्यान्सर लागेकालाई कुखुरा मन्साएर हुँदैन’
‘राप्रपालाई ‘भजन मण्डली’ बनाउने निर्मल निवासको योजना हामी कहिल्यै सफल हुन दिने छैनौं’- कमल थापा